.မုန္းေနသူ ကို ခ်စ္ေစလိုလ်ွင္…. ဒီနည္းေလး လုပ္ႀကည္႔ပါ… – Askstyle
.မုန္းေနသူ ကို ခ်စ္ေစလိုလ်ွင္…. ဒီနည္းေလး လုပ္ႀကည္႔ပါ…
ကဲ ေကာင္းပါၿပီ၊ ေအာက္မွာ ေဖာ္ၿပမယ္႔ နည္းလမ္းေလးကို ေပးလိုက္တာ ၁၅ ရက္ေတာင္ မႀကာလိုက္ဘူး၊ အဲဒီ ဒကာမေလးဆီက ဖုန္းဆက္ေၿပာၿပပါတယ္၊အရွင္ဘုရား အဆင္ေၿပသြားပါၿပီ၊ ေက်းဇူး အမ်ားႀကီး တင္ပါတယ္၊ တပည္႔ေတာ္ ေၿပာတဲ႔လူတေယာက္ဆိုတာ အရွင္ဘုရား ဒကာႀကီးပါ။သူက အိမ္ကုိ ၿပန္မလာေတာ႔လို႔ အကူအညီေတာင္း၇တာပါတဲ႔၊တကယ္ေတာ႔ ဒီနည္းလမ္းကို အသု့ံးၿပဳရင္ ကိုယ္႔အေပၚ မေကာငး္ႀကံထားသူေတြေတာင္ လာၿပီး ဒူးေထာက္ေတာင္းပန္တာမ်ိဳးေတြ ရွိခဲ႔ဖူးတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္၊ဒါေႀကာင္႔ စာဖတ္ ပရိသတ္မ်ား ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္သားၿပီး အက်ိဳးရွိရွိအသုံးၿပဳေစခ်င္ပါတယ္၊
အရှင်ဘုရား တပည့်တော် ကို လူတစ်ယောက်က မုန်းနေပါတယ်၊
အဲဒါ ပြန်ချစ်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနည်းလမ်းရှိပါသလားဘုရား၊ အဲဒီလူက အရင်ကတော့ တပည့်တော်ကို ချစ်နှစ်သက်ပါတယ်။ အခုမှ မုန်းသွားတယ် ထင်တယ်၊ နည်းလမ်း ရှိတယ် ဆိုရင်ကူညီပါအုံးဘုရ့ား၊
လောကမှာ လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်ကိုယ့်ကို မုန်းတဲ့ရန်သူတွေ၊ ချစ်ခင်ပြီးမှ စိမ်းကားရက်စက်သွားသူတွေ၊ ကိုယ်ကြီးပွားအောင်မြင်ကျော်ကြားနေတာကို မနာလိုသူတွေ နဲ့စီးပွားပြိုင်ဘက်အချငး်ချင်း ပြိုင်ဘက်ကို မကောင်းကြံပြီး အနိုင်ယူတာတွေ အားလုံးဟာမကြုံချင်လည်း ကြုံရ၊ မဆုံချင်လည်း ဆုံရတဲ့ လူ့ဘဝထဲက အဖြစ်အပျက်တွေပဲ မဟုတ်လား၊ ဒါကြောင့်လဲ လူ့ဘဝက တိုတောင်းပေမယ့် စိတ်ကြည်နူးစရာက နညး်နည်း-စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေက တနေ့တနေ့မှာ ကြုံရတာ များလွန်းလို့ လူတခု ပူမှု့ရယ်ကဆယ်ကုဋေ လို့တောင် ရှေးလူကြီးတွေကငြီးတွားခဲ့ကြတယ်။
စာရေးသူက ဖြေလိုက်တယ်အော် ရှိပါတယ်၊ ဗေဒင် ယတြာတွေအင်းအိုင် ခလှဲ့တွေတော့ မတတ်ပါဘူး၊ဒါပေမယ့် ဘုရားဟောထားတဲ့ နည်းလမ်း ကို ပြောပြပါ့မယ်၊
လူတော်တော်များများ အဆင်ပြေသွားကြတာ ဆိုတော့ ဒကာမလေးလဲပြေလည်နိုင်မယ် လို့ ထင်တယ်၊ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ပြောပြထားတဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်း လုပ်ရင် တကယ်ပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဒကာမလေး ကို အကြောင်းပြုပြီးအားလုံးကို သိစေချင်လို့ ဒီကနေပဲ ဖြေပေးလိုက်ပါမယ်၊
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဒီနည်းလမ်းကို နှလုံးသားအတွက် သက်သက်သာ မဟုတ်ပဲကျန်တဲ့ စီးပွားရေး လူမှု့ရေး ဘာသာရေး စတာတွေမှာ နားလည်မှု့လွဲပြီး စိတ်ဝမ်းကွဲနေရင်ဖြစ်စေ ရန်သူတွေလို ဆက်ဆံနေရရင် ဖြစ်စေ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းအချင်းချင်း မညီညွတ်ပဲ စိတ်ညစ် သောက ရောက်နေရင် ဖြစ်စေအသုုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကဲ ကောင်းပါပြီ၊ အောက်မှာ ဖော်ပြမယ့် နည်းလမ်းလေးကို ပေးလိုက်တာ ၁၅ ရက်တောင် မကြာလိုက်ဘူး၊ အဲဒီ ဒကာမလေးဆီက ဖုန်းဆက်ပြောပြပါတယ်၊အရှင်ဘုရား အဆင်ပြေသွားပါပြီ၊ ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်၊ တပည့်တော် ပြောတဲ့လူတယောက်ဆိုတာ အရှင်ဘုရား ဒကာကြီးပါ။သူက အိမ်ကို ပြန်မလာတော့လို့ အကူအညီတောင်းရတာပါတဲ့၊တကယ်တော့ ဒီနည်းလမ်းကို အသု့ံးပြုရင် ကိုယ့်အပေါ် မကောငး်ကြံထားသူတွေတောင် လာပြီး ဒူးထောက်တောင်းပန်တာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ် လို့ ဆိုပါတယ်၊ဒါကြောင့် စာဖတ် ပရိသတ်များ သေသေချာချာမှတ်သားပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်၊
၂ ။ ပြီးတာနဲ့ ကျောက်ခဲသေးသေးတလုံးကို ဆေးကြောပြီး ဖန်ခွက်ထဲ ထည့်ရပါမည်၊
ရေထဲမှာ ရှိတဲ့ ကျောက်ခဲလေးဟာ အေးမြနေသလို အခု မင်းကို အေးမြတဲ့ရေထဲမှာ စိမ်ထားလိုက်ပြီ၊မင်းရဲ့ ဒေါသတွေ ပြေပျောက်ပြီး စိတ်ရော လူရော အေးချမ်းလာပြီး ငါ့အပေါ်မေတ္တာသက်ဝင်လာပါစေ၊
ငါကတော့ မင်းကို အပြစ်မမြင်ပါဘူး၊ ဆက်လက် ချစ်ခင်နေမှာပါ၊လက်ထပ်ထားသူ ဖြစ်က အရင်လို ချစ်ခင်ပါစေ – စသည်ဖြင့် ပါးစပ်က ရွတ်ဆို၇ပါမယ်၊
၄ ။ တစ်ဦးတယောက်အပေါ် ရည်စူးမေတ္တာပို့ပြီးရင်တော့ သတ္တဝါအားလုံးနဲ့နတ်ဗြဟ္မာတွေကို တိုင်တည်ပြီးမေတ္တာပို့ အမျှဝေ ရပါမယ်၊
နည်းလမ်းလေးကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာ့ သမိုင်းမှာ မေတ္တာအရာမှာထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ တောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်ကြီး ဦးဥတ္တမ သာရကိုယ်တော်တိုင် ပေးသနားထားခဲ့တဲ့အတွက်ယုံယုံကြည်ကြည် အသုံးပြုပြီး မုန်းသူ မနာလိုသူ ရန်သူအားလုံးကို ချစ်ခင်ကြင်နာနိုင်ပါစေ၊
မှတ်ချက်၊ ကိုယ်က အမုန်းခံနေရမှ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်၊ ကိုယ်က မုန်းနေသူဆိုရင်တော့ အချိန်ယူပြီး ပွားများမှ သက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်၊